ဒီနှစ်မိုးရာသီမှာ ခေတ်စားလာမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင် (၅) ရောင် - For her Myanmar
ဒီအရောင်တွေနဲ့ဆို မိုးရာသီမှာ အလှဆုံးဖြစ်နေတော့မှာပဲ
မိုးရာသီမှာဆို ဘယ်နေရာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် ထိုင်းထိုင်းမှိုင်းမှိုင်းနဲ့ မည်းမှောင်နေတာချည်းပဲလေ။ ဒီရာသီဥတုကြီးကို သွားပြောင်းလိုက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ယောင်းပြောင်းနိုင်တာ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ယောင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေပဲပေါ့။ မိုးရာသီမှာ လန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ အသွင်ကို ရစေနိုင်ဖို့ ဒီလိုအရောင်လေးတွေ ဆိုးကြည့်ပါနော်။
ခပ်မိုက်မိုက် ကြက်သွေးရောင်က ယောင်းကို သွက်လက်ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသွင်ကို ပေးပါတယ်။ ထုံထုံထိုင်းထိုင်း ရာသီဥတုကြီးမှာ ယောင်းတင်မက ယောင်းကို မြင်လိုက်ရတဲ့သူတိုင်း စိတ်အားတက်စေမှာပါ။
အနီနဲ့ လိမ္မော်ရောင်ကြားက သံချေးရောင်လောက် မိုးရာသီနဲ့ ပနံရတာမရှိပါဘူး။ နေ့တိုင်းရုံးတက်နေရတဲ့ ယောင်းတွေအနေနဲ့ဆို ဒီအရောင်က အရမ်းလည်း မတောက်တာကြောင့် အဆင်ပြေပါတယ်။
မိန်းကလေးတော်တော်များများက ဘာလို့လဲမသိ … နှုတ်ခမ်းနီ လိမ္မော်ရောင်ဆိုးရမှာကို တွန့်ဆုတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ လိမ္မော်ရောင်က ဖြူသူကော ညိုသူကောနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အပြင် ဘယ်လိုအဝတ်အစားနဲ့မဆို စည်းချက်ကျကျလှနေစေတာမို့ ယောင်းတို့ကို မိုးတွင်းမှာ လိမ္မော်ရောင်နှုတ်ခမ်းနီလေးဆိုးဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
လူတိုင်းသဘောကျတဲ့ ပန်းဆီရောင်တောက်တောက်လေးကလည်း ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ကိုယ်စားပြုတာမို့ မေ့ထားလို့မရပါဘူး။
အနီရောင် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဖို့ သိမ်းသွင်းနေစရာလိုသေးလို့လား ? လူတိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်ပြီး မိုးတွင်းမှာ တောက်ပနေစေတဲ့အပြင် ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် classic ဖြစ်နေစေပါတယ်။
ကဲ … ဒီလောက်ဆို မိုးရာသီမှာ အပြုံးတစ်ပွင့်တောက်ပနိုင်အောင် ဘယ်လိုနှုတ်ခမ်းနီအရောင်လေးတွေကို ရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတာ သိကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဒါဆို အမြဲလှနေဖို့ကတော့ ယောင်းတာဝန်ပဲနော် …
ဒီအရောငျတှနေဲ့ဆို မိုးရာသီမှာ အလှဆုံးဖွဈနတေော့မှာပဲ
မိုးရာသီမှာဆို ဘယျနရောပဲကွညျ့လိုကျကွညျ့လိုကျ ထိုငျးထိုငျးမှိုငျးမှိုငျးနဲ့ မညျးမှောငျနတောခညျြးပဲလေ။ ဒီရာသီဥတုကွီးကို သှားပွောငျးလိုကျဖို့ မဖွဈနိုငျပမေဲ့ ယောငျးပွောငျးနိုငျတာ တဈခုတော့ရှိပါတယျ။ ဒါကတော့ ယောငျးရဲ့နှုတျခမျးနီအရောငျတှပေဲပေါ့။ မိုးရာသီမှာ လနျးဆနျးတကျကွှတဲ့ အသှငျကို ရစနေိုငျဖို့ ဒီလိုအရောငျလေးတှေ ဆိုးကွညျ့ပါနျော။
ခပျမိုကျမိုကျ ကွကျသှေးရောငျက ယောငျးကို သှကျလကျထကျမွကျတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျအသှငျကို ပေးပါတယျ။ ထုံထုံထိုငျးထိုငျး ရာသီဥတုကွီးမှာ ယောငျးတငျမက ယောငျးကို မွငျလိုကျရတဲ့သူတိုငျး စိတျအားတကျစမှောပါ။
အနီနဲ့ လိမ်မျောရောငျကွားက သံခြေးရောငျလောကျ မိုးရာသီနဲ့ ပနံရတာမရှိပါဘူး။ နတေို့ငျးရုံးတကျနရေတဲ့ ယောငျးတှအေနနေဲ့ဆို ဒီအရောငျက အရမျးလညျး မတောကျတာကွောငျ့ အဆငျပွပေါတယျ။
မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားက ဘာလို့လဲမသိ … နှုတျခမျးနီ လိမ်မျောရောငျဆိုးရမှာကို တှနျ့ဆုတျကွတယျ။ တကယျတော့ လိမ်မျောရောငျက ဖွူသူကော ညိုသူကောနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့အပွငျ ဘယျလိုအဝတျအစားနဲ့မဆို စညျးခကျြကကြလြှနစေတောမို့ ယောငျးတို့ကို မိုးတှငျးမှာ လိမ်မျောရောငျနှုတျခမျးနီလေးဆိုးဖို့ တိုကျတှနျးပါရစေ။
လူတိုငျးသဘောကတြဲ့ ပနျးဆီရောငျတောကျတောကျလေးကလညျး ပြျောရှငျတကျကွှတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျကို ကိုယျစားပွုတာမို့ မထေ့ားလို့မရပါဘူး။
အနီရောငျ နှုတျခမျးနီဆိုးဖို့ သိမျးသှငျးနစေရာလိုသေးလို့လား ? လူတိုငျးနဲ့လိုကျဖကျပွီး မိုးတှငျးမှာ တောကျပနစေတေဲ့အပွငျ ဘယျအခြိနျပဲဖွဈဖွဈ classic ဖွဈနစေပေါတယျ။
ကဲ … ဒီလောကျဆို မိုးရာသီမှာ အပွုံးတဈပှငျ့တောကျပနိုငျအောငျ ဘယျလိုနှုတျခမျးနီအရောငျလေးတှကေို ရှေးခယျြသငျ့လဲဆိုတာ သိကွလောကျပွီထငျပါတယျ။ ဒါဆို အမွဲလှနဖေို့ကတော့ ယောငျးတာဝနျပဲနျော …
Tags: Beauty, colors, lips, lipstick, monsoon, rainy season, tips